Lesi siqephu sitshengisa kahle ukuthi yikuphi imibuso ye-Afrika yasendulo, ngoba ngaphambi kokuba singasho, kodwa imibuso ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Februwari 29, 2020 00: 10 Awekho amazwana
Ngumbuso wase-Ashanti waseGhana okhonjiswa kule vidiyo ngokubusa kwawo nokuthi imicimbi (amadili) yenzeka kanjani ngaphakathi kombuso. Bese ikakhulukazi ubuciko bokuhlobisa imibuso nezingubo zendabuko ke amandla obukhosi.
Siyabonga ngokubonisa isiko lethu elimnyama / ele-Afrika.
I-Oct29 07: 44
HI / LO: 8/4 p
HI / LO: 10/4 p
HI / LO: 15/10 p
HI / LO: 8/1 p
HI / LO: 9/1 p
HI / LO: 14/6 p
Yimuphi umkhawulo okhona phakathi kokulingana nobulungiswa? Yize ukulingana nobulungiswa kuyahambisana, kodwa-ke kukhona umkhawulo phakathi kwalokhu okubili; lapho kukhona ukulingana, kukhona ukufana; kuyilapho lapho kukhona ubulungiswa kukhona ukungakhethi
Ngo-Okthoba 27, 2020 03: 10